Ithuluzi ukuthi kuzosiza ukuqeda zonke izimpawu I-esikhathini esifishane, futhi iyona engcono ukukhwehlela imithi. Ngaphezu kwalokho, umphumela wawo besimiso somzimba sokuzivikela nezinye izitho nomzimba sisonke kufanele kube kancane negative. Ukuze umuntu ngamunye uhlukile. Kube antitussives, okuyizinto kahle abantwana, nezinye izidakamizwa yakhelwe ukuthola kube nabantu abadala nabanye kuzokusiza ukuqeda lesi sifo ngesikhathi ekhulelwe noma lactation.
Ngaphezu kwalokho, amalungiselelo amaningi ibanda uyibize ngokuthi okungcono yingenxa kakhulu bohlu amathuba okuba nemiphumela engemihle. Kubo sesinalo ubalwe njengenye antibiotic. Sinenkosi nethonya elinamandla kakhulu futhi ngempela okubhekana nanoma isiphi isifo noma ukutheleleka ngokushesha ngangokunokwenzeka, kuhlanganise nalabo ukukhwehlela. Kodwa abe nomthelela omubi kakhulu amasosha omzimba womuntu, buthaka ke kakhulu. It iyeke ngokuzimela akhiqiza amasosha omzimba adingekayo ukulwa namagciwane nama-virus. Kodwa kwezinye izimo, imithi elwa namagciwane nokusindisa izimpilo. Ngakho-ke, lapho isifo asegelezela ifomu acute, ngeke akwenze ngaphandle kwabo. Siphawula kuphela ukuthi amalungiselelo abandayo esinjalo kufanele aqokwe uchwepheshe, emva ukuxilongwa okujuli- wedlula konke ukuhlolwa okudingekayo.
Ngempela ukuchayeka okuhle emuthini ube zishise, kanye nalabo izidakamizwa, okwa- kwenziwa ngesisekelo izithako zemvelo kuphela. Kukhona antitussives ezifana kancane eqolo ngaphezu kwanoma amaphilisi ezivamile, kodwa ngeke ukulimaza impilo. Abaningi ukukhetha amathonsi "Gedeliks", njengengxenye lapho zikhona izithako herbal kuphela, okuhlanganisa ephulukisa ivy. Lapho ubuhlungu, ezomile, ukunwaya ukukhwehlela kufanele bathathe labo imithi esiza ukucindezela reflex ukukhwehlela kanye ukuzinza of isikhwehlela kuphela. Lezi zihlanganisa "Libeksin", "Bronholitin" kanye candies futhi pastilles nge esikweyoku.
Uma phlegm ikhishwe, kodwa ukungaguquguquki ngempela viscous Kufanele kukhethwe antitussives ukugqugquzela liquefaction yayo. Lokhu "Acetylcysteine", "Lasolvan" futhi "Bromhexine". Le mithi ngokushesha ukuqeda bronchospasm, nethonya zokuzivikela futhi eqeda ukuvuvukala phezu ulwelwesi lwamafinyila womphimbo. Uma ebusweni babo bonke izimpawu acute nezifo zokuphefumula, onguchwepheshe akunakwenzeka ukuba kube antibiotic, futhi zisebenza antitussives yemvelo futhi ngempumelelo. Endabeni ka ukucinana kwemigudu yokuphefumula noma inyumoniya, ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane akunakugwenywa, njengoba kukhona kuqala okusithiyayo okusheshayo umsebenzi amagciwane abe nenkani. Yingakho-ke kubalulekile lapho kuqubuka lesi sifo ukuthi ufune iseluleko uchwepheshe. Wena, ungakwazi ukuqeda ukukhwehlela, nakuqaphela ukuthi onjalo zokuzelapha kungaholela ziwohloke.
Uma udokotela akazange ayembule iyiphi izifo ezingathi sína kwababhemayo, ungasebenzisa ngokuphepha izindlela zesintu. Balondekile impilo yethu futhi abe impela nethonya elinamandla ekwelapheni. Yingakho abantu abaningi bakholelwa ukuthi ikhambi kangcono ukukhwehlela - iresiphi efakazelwe amakhulu eminyaka okhokho bethu. Enye yezindlela elula ukuqeda kukhwehlela useyayamukela uwoyela pine, okuyinto okuthengiswa iyiphi ikhemisi. Shayela droplet phakathi pipette futhi iconsa ke eduze impande olimi. Lezi manipulations yayidlalwa kusihlwa futhi emva uphaphame.
Kwezinye izimo, yesikhathi eside noma ukukhwehlela okungalapheki izinqamu ezinhle kakhulu fresh uwoyela wemvelo, kudliwa esiswini esingenalutho. Ebusuku, esifubeni wesula elomile nivame kahle ngamafutha yengulube. Singasetshenziswa kanye bhotela elicibilikile, engeza kancane akhiphe uphayini, kodwa okungcono umphumela cindezela ukwakhela esifubeni. izindlela Traditional uvumele azamukele ngisho nejabulisayo. Thatha elikhulu elimnyama itheniphu, wenze kulo ushona uwathele esojwini. Thatha le izindlela esihlwabusayo ngempumelelo kathathu ngosuku kuze nokuqedwa oluphelele lwazo zonke izimpawu.
Isizukulwane yakamuva zokuvimbela inzalo